प्यूठान कांग्रेस : गिरी, रिजाल र बर्मा सभापतिमा भिड्दै !
अरु कोको हुन् उमेदवार ? कसको गुट के ?
मंगलवार, भदौ १५, २०७८ प्यार अलि खाँन
प्यूठान : नेपाली कांग्रेस प्यूठानको १४ औं जिल्ला अधिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा उमेदवार आकांक्षीहरुको चर्चा चलिरहेको छ । तीन गुटका नेताहरु चुनावमा भिड्ने तयारीमा छन् । जिल्लामा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवा गुटका नेताहरु चुनावी मैदानमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरुले आफ्नो उमेदवारी सामाजिक सञ्जालबाट समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
को को भिड्दै छन् सभापतिमा ?
कांग्रेस प्यूठानको सभापतिमा तीन नेताहरुको चर्चा छ । हाल पार्टीका जिल्ला सचिव एवं गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी, देवेन्द्र बर्मा र पूर्व सचिव एवं नौवहिनी गाउँपालिका अध्यक्ष शिव प्रसाद रिजाल सभापतिमा भिड्ने तयारीमा छन् । कांग्रेस नौबहिनी गाउँपालिका स्तरीय भेला तथा बैठकबाट गाँउपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका रिजाललाई सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा भएको छ । रिजालले आफूलाई बिजयी बनाउन समेत आग्रह गरिरहेका छन् । उनी अघिल्लो जिल्ला अधिवेशनमा वर्तमान सभापति अमरप्रसाद भण्डारीसँग २३ मतले पराजय भएका थिए । उनी यसपाली सभापति बनेरै छाड्ने दौडमा देखिन्छन् ।
आगामी अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको आकांक्षी भएको पार्टी सचिव देवेन्द्र बर्माले बताए । तर उनले आफू कुनै गुटमा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म कुनै पनि समूहमा छैन, शुद्ध नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हु’, बर्माले भने, ‘सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि मेरो अधिकतम प्रयास हुनेछ, म त्याग गर्न पनि पछि पर्दैन ।’ नेपाली कांग्रेसमा एकपटक सभापति भएको नेता दोहोरिनु हुँदैन भन्नेमा आफु अडिग रहेको उनले बताए ।
कांग्रेस जिल्ला सचिवमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं स्थानीय तहको निर्वाचनमा झिमरुक गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी प्रमोद पोखरेलले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाटै आफू सचिवमा लड्न चाहेको भन्दै सुभचिन्तकहरुको सुझाव मागिरहेका छन् । रिजाल र पोखरेल देउवा समूह गुटका हुन् । सचिव पदमै वर्तमान पार्टी सभापति अमंर प्रसाद भण्डारी निकटका हालका कोषाध्यक्ष धनेश्वर भण्डारीको नाम चर्चामा छ ।
कांग्रेस वृतमा वर्तमान जिल्ला पार्टी सभापति अमंर प्रसाद भण्डारीले एक कार्यकाल थप दोहोरिन चाहेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । नेता भण्डारीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उपयूक्त समयमा मात्र आफूले आफ्नो धारणा राख्ने प्रतिक्रिया दिए । निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा क्षेत्रिय सभापतिमा देउवा समूहबाट जैनुल मियाँ, पौडेल समूहबाट वर्तमान सभापति टेकप्रसाद भण्डारी, तरुण दल प्यूठानका उपाध्यक्ष दीपक केसीको नाम चर्चामा छ । तरुण नेता केसी अझै प्रष्ट रुपमा कुनै गुटमा नखुलेको स्रोतले बताएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फ क्षेत्रिय सभापतिमा गगन÷सिटौला समूहबाट दुई जनाको नाम चर्चामा छ । बालाराम पौडेल र नेवीसंघ प्यूठानका अध्यक्ष एनपी मगर उठ्न चाहेको बुझिएको छ । क्षेत्रिय सभापतिमै झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्वर २ का वडा अध्यक्ष समेत रहेका बलदेव महतराको नाम चर्चामा छ । देउवा समूहबाट पनि क्षेत्रिय सभापतिमा दुई जनाको नाम चर्चामा रहेको बताइन्छ । वर्तमान सचिव चन्द्रलाल न्यौपाने तथा जुमान जिसीको नाम चर्चामा छ । जिसीले सामाजिक सञ्जालबाटै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस प्यूठानको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार देउवा समूहबाट सभापतिमा शिवप्रसाद रिजाल आधिकारिक उम्मेदवार तय भइसकेको तर पौडेल तथा गगन÷सिटौला समूहबाट भने सभापति पदमा सर्वसम्मत उम्मेदवार तय अझै नभइसकेको चर्चा छ । सभापति पदमा सहमति गर्नका लागि भन्दै वर्तमान सभापति अमरप्रसाद भण्डारी लुम्बिनी प्रदेशको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने र विष्णु कुमार गिरी वा देवेन्द्र बर्मा मध्ये एक जनालाई सभापतिमा उम्मेदवारी टुंग्याउनेबारे छलफल पनि चलिरहेको कांग्रेस पौडेल समूह स्रोतले बताएको छ ।
उपसभापतिमा देउवा पक्षधरका कांग्रेस क्षेत्र नं २ का वर्तमान सभापति सरोज थापा (रोज राणा) को नाम चर्चामा छ भने देउवा समूहबाटै वर्तमान उपसभापति बद्री लम्सालको नाम बाहिर आएको छ । जिल्ला अधिवेशनबाट छानिने २४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि अधिवेशन पूर्व नै केन्द्रमा गएर देउवा÷पौडेल तथा गगन÷ सिटौला समूहले भागबन्डामा टुंग्याईएको बताईएको छ ।
क्रियाशील सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधि संख्या रहने महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रमोद पोख्रेलले जानकारी दिए । वडाबाट न्यूनतम १६ जना प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने र जिल्लाबाट सभापति सहित २५ जनाले केन्द्रमा मतदान गर्ने प्रावधान रहेको पोखरेलले बताए ।
कुन नेता कुन गुटमा ?
नाम पद गुट
डा. गोविन्दराज पोखरेल महाधिवेशन प्रतिनिधी शेखर कोइराला
दिवार गौतम पौडेल समुह
मुक्ति शर्मा पौडेल पौडेल समुह
सुबास केसी निवर्तमान सभापति पौडेल समूह
अमर भण्डारी सभापति पौडेल समूह
देवेन्द्र बर्मा सचिव पौडेल समूह
धनलक्ष्मी श्रेष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधी देउवा समुह
शालिग्राम पण्डित पूर्व सभापति देउवा समुह
हुकुम बहादुर विष्ट देउवा समुह
शिव रिजाल निवर्तमान सचिव देउवा समुह
बद्री लम्साल क्षेत्रिय सभापति क्षेत्र नम्वर १ देउवा समुह
रोज राणा क्षेत्रि सभापति क्षेत्र नम्वर २ देउवा समुह
खिमानसिँह रायमाझी महाधिवेशन प्रतिनिधी देउवा समुह
विष्णु कुमार गिरी सचिव गगन/सिटौला समूह
पशुपति डिसी शेखर कोइराला
निमा गिरी गगन/सिटौला समूह
भगबती विष्ट देउवा समुह
प्रकाशित मिति: मंगलवार, भदौ १५, २०७८, १२:१८:४९
पहिरोले चुड्यो कलिला मुनाहरु ! बिहिवार, आश्विन ७, २०७८ 173